विकास र समृद्धिपथमा ‘राप्तीसोनारी’ – Satyapati
विकास र समृद्धिपथमा ‘राप्तीसोनारी’
प्राकृतिक स्रोत साधनले समृद्ध राप्तीसोनारी गाउँपालिका विकासमा फड्को मार्दै भन्ने जनप्रतिनिधिहरुको काम गर्ने शैलीले नै प्रष्ट हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियताले विकासको गति बढेको छ । अझ निर्वाचनका बेला जनप्रतिनिधिले गरेका बाचा अक्षरशः पालना गर्दै योजनाबद्ध विकासका काम भइरहेका छन् ।
आफन्त, छिमेकी र चिनजानका मानिसको नजरमा समृद्ध हुने, देखिने चाहना नयाँ हुँदैन । पहिला थियो, अहिले छ र पछि पनि रहनेछ । समृद्ध बन्ने सबैको सपना बन्ने गर्छ, यो अवस्थामा पुग्ने वा यस्तो अवस्थालाई आफैले प्राप्त गर्ने । यो चाहना आफैमा नराम्रो होइन । मिहेनत गर्दै जाँदा यति कुरा पूरा हुँदैन भन्ने पनि छैन । तर यो अवस्थामा पुग्न धेरैलाई हतारो छ । उद्यम, पेसा, व्यवसाय, नाफा, सञ्चय, लगानी, फेरि नाफा, सेवा, पौरख आदिको माध्यमबाट यो चाहना पूरा गर्न नसकिने होइन । यही बाटोबाट पनि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र विश्वले आफ्नो समृद्धिको चाहना पूरा गरेका छन् । यो एकदमै स्वाभाविक, दिगो र टिकाउ बाटो हो । तर यो बाटो अलि लामो हुन्छ । सबैलाई हतार छ । चाँडै अरुको अगाडि समृद्ध देखिनुछ । सम्मानित हुनुपरेको छ ।
व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र विश्वले समृद्धिको सपना देख्नु आश्चर्य होइन । तर चासोको विषय कसरी ? यत्तिको सम्पन्नता अर्थात् समृद्धिको जोहो गर्नसक्ने व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र विश्वको देखिने वा नियमित स्रोत, पेसा, सेवा, व्यवसाय आदि के छ भनेर हेर्दा त्यसलाई धान्ने अवस्था छ कि छैन ? व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र विश्वको आम्दानीले समृद्धिपथमा पुग्न सम्भव होला ? यस्तो प्रवृत्तिमा उभिएको हाम्रो समृद्धिको जग अहिले निकै कमजोर छ । परिस्थिति फेरिँदै जाँदा समृद्धिको आधार फेरिँदै जाने पक्का छ । अहिले गाउँमा समृद्धि ल्याउन स्थानीय तहहरुको सक्रियताले व्यक्ति र समाजको समृद्धिले निरन्तरता नपाउने पक्का छ । सबैका लागि समान समृद्धि हुँदैन, तर समान अवसर हुनुपर्छ । उत्पादन, न्यायोचित सेवा, मूल्यमा आधारित पेसा र व्यवसायसँग नजोडिएको समृद्धिले न समाजको हित गर्छ, न दिगो हुन्छ । त्यसैले समृद्धिको मात्रै होइन, दिगो समृद्धिको कुरा गर्दा यसको जग बलियो बनाउन सबैको ध्यान जानुपर्छ । सबै तहका सरकारले यसतर्फ बढी पहल गर्नुपर्छ ।
‘संसारको परिवर्तन गर्नुछ भने आफूबाटै सुरु गरौं’ यो भनाईलाई चरितार्थ पार्न राप्तीसोनारीमा विकासको अभियान चलेको छ । र यसका बाहकहरु अरु कोही नभई यहाँकै जनता र जनप्रतिनिधिहरु नै हुन् । यहाँ जनताको प्रश्नहरुका जवाफ विकास बर्षाएर गरिन्छ । जनताका हरेक दुविधा र आशंकाहरु विकासको योजना, कार्ययोजना र तिनीहरुका सम्पानमार्फत निवारण गरिन्छ । २० बर्षदेखि नीति र कार्यक्रमप्रतिका नैराश्यता र असन्तुष्टीका बाढीले भत्किएका बाँधहरुलाई विकासे पर्खालहरुले सम्हालिन्छ । हरेक च्यातिएका मनहरु, घरहरु र बस्तीहरुलाई जनप्रतिनिधिका काम र सक्रियताले चम्काइन्छ । भत्किएका र रोहिरहेका जीर्ण पूर्वाधारहरु मर्मत सम्भार गरेर आँशु पुछिन्छ । यहाँ आपत–विपत र प्राकृतिक प्रकोपमा परेकालाई कुनै समय नै नलाई उद्धारमा जुटि औषधि उपचार बर्साइन्छ, दाल चामलको ओहिरो लगाइन्छ र जनता रुँदा उनीहरुका आँशु पुछिन्छ र हाँस्दा साथ दिइन्छ ।
अव्यस्थित, बेहाल र धरासयपूर्ण विद्यालयहरु, त्यहाँका अभिभावक र अवोध बालबालिकाका मनहरुलाई ती विद्यालयहरुको सहि पद्धति र प्रणालीमा ल्याई समयनाकूल प्रतिष्पर्धी बनाई ती घाउहरुमा मलम लगाइन्छ । यहाँ जिल्लाका कुनाकुनामा, बस्तीबस्तीमा थुप्रिएका कुकृति, विकृति र फोहोर मैलाका थुप्राहरुलाई राप्तीमा विसर्जन गरिन्छ । जिल्लाकै विकटताको पराकाष्टमा रुमलिएका राप्तीसोनारीका नागरिकहरुका घरआँगनमा चिल्ला बाटोका अनुहार देखिन्छन् । उनीहरुकै घरदैलोमा धारा बिजुली, चिल्ला बाटोलाई पु¥याएर स्थानीय सरकार अर्थात् घरआँगनमै गाउँको सिंहदरबाट भएको आभास दिलाइन्छ । पहिला भाषण सुनेर वाक्क भएका जनतालाई बाटाघाटा पुलहरु ऐतिहासिक मठ मन्दिरहरु र व्यवस्थित पर्यटकीय स्थलहरु बनाएर मन्त्रमुग्ध बनाइन्छ र नेता वा जनप्रतिनिधिहरुको नयाँ परिभाषा दिइन्छ । यी राप्तीसोनारीमै जन्मिएका जनसेवकहरु हुन् । जसले नागरिकहरुका सामू उदाहरणीय कार्यहरु गर्दै जनमनमा डेरा जमाएका छन् ।
एउटा जनप्रतिनिधिले आफ्नो शक्तिशाली र व्यवहारिक दर्शन, योजना, कार्ययोजना र नीतिहरुको कार्यान्वयनले आम नागरिकको मुहार फेर्न सक्छ र छोटो समयमै धेरै कामहरु गर्नु सकिन्छ भन्ने कुराको पुष्टी राप्तीसोनारीका जनप्रतिनिधिले दिइसकेका छन् । राप्तीसोनारीमा जनताले चुनेका र मन मस्तिष्कमा राखेका जनप्रतिनिधिमा त्यो क्षमता र इच्छा शक्ति भएको महसुस गरिसकेका छन् । आफ्नो विजयको दिनदेखि नै समयको बर्बाद नगरी लगातार र अनवरतरुपले योजना, कार्ययोजना, नीति, नियम र विकासका अनेकौं क्रियाकलपमा होमिएपछि सुगम जिल्लाको दुर्गममा पर्ने राप्तीसोनारी बाँके जिल्लामै आदिकालदेखि ‘बत्तीमुनिको अँध्यारो’जस्तै थियो । २० बर्षसम्मको जनप्रतिनिधि विहिनतासँगै २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आएका जनप्रतिनिधिहरुको अथम मेहेनत र सक्रियताका कारण समृद्धि र विकास निर्माणमा उदाहरणीय बनेको छ र चाँडै अन्य स्थानीय तहमध्ये उत्कृष्ट स्थानीय तहका रुपमा घोषित हुनेमा दुई मत छैन । यो सबै जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति र कार्यक्षमताको प्रतिफल हो ।
भनिन्छ, यदी तिम्रो काम र बोली सधैं विवादरहित भएको चाहन्छौँ भने कुनै कामै नगर र बोल्दै नबोल । यद्यपि यति छोटो समयमा यतिधेरै विकासका कामहरु भएका छन् । यतिधेरै सह्रानीय कदम चालिएका छन् की ती सबै विवादमुक्त नहुन सक्छन् । जनताले केही छिटपुट कामहरुप्रति असहमति, गुनासा र तिक्तता पोख्न सक्छन् । त्यस्ता विवादित कदमहरुलाई तुरुन्त सच्याई जनअपेक्षित बनाउनुपर्नेमा कुनै दुइमत छैन । यस्ता जनगुनासालाई पनि सम्बोधन गर्दै अघि बढेमा राप्तीसोनारी देशकै नमूना स्थानीय तह बन्ने कुरामा निर्धक्क हुन सकिन्छ । केही असन्तुष्टि मानवीय स्वभाव पनि हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा पहुँच नपुगेका बालबालिका, शिक्षक अभावमा भएको पठनपाठनको समस्याजस्ता धेरै समस्याहरू समाधान भएका छन् । विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारका काम तीव्ररुपमा भइरहँदा नागरिकले सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा आएको महसुस गरेका छन् । राम्रा नीतिहरू लागू गर्दै नागरिकलाई सिंहरदबारको महसुस गराउने अभियानमा जनप्रतिनिधिको सक्रियता बढ्दो छ ।
अत्यन्त सीमित साधनस्रोत भए पनि गाउँ र समाजका न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गराउन जनप्रतिनिधिलाई भ्याइनभ्याइ छ । प्रकृतिका मनोरम दृश्यले सजिएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकालाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन जनप्रतिनिधिहरु लागिपरेका छन् । गाउँपालिकाको विकासका लागि प्राथमिकताका आधारमा पर्यटन, कृषि, बाटोघाटो, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विषयलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा गाउँपालिका स्तरबाट पुँजीगततर्फ १०१ वटा साना तथा ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । जसमा गाउँपालिकाले संघीय, प्रदेश र आन्तरिक स्रोतमार्फत २६ करोड ४६ लाख ६५ हजार १९० रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै वडा गतरुपमा पुँजीगततर्फ ११ करोड १० लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसबाट पनि गाउँपालिकाको विकास र समृद्धि तीव्ररुपमा भइरहेको भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि चुनिएका जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो ठाउँको विकासमा चासो राख्दै गाउँका बजारलाई व्यवस्थित गरिरहेका छन् र धुलौटे सडकलाई कालोपत्रे गरेकै कारण राप्तीसोनारीका ग्रामीण क्षेत्रका सडकहरु फेरिएका छन् । तीन वर्षअघि ‘बत्तीमूनिको अँध्यारा’ गाउँहरु उज्यालिएका छन् । मट्टितेल र सोलारको सहायताले बालिने बत्तीको सट्टा धेरै गाउँमा बिजुली पुगेको छ । गाउँपालिकाले सबै बस्ती र गाउँमा उज्यालो अभियान चलाएकै छ । अबको एक बर्षभित्रै राप्तीसोनारीका सबै वडामा अहिले विद्युत्को पहुँच पुग्नेछ । विकासको दृष्टिकोणले पछि परेको राप्तीसोनारीमा अहिले मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि विकासले फड्को मारेको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका सबैजसो धुलौटे सडक कालोपत्रे गरिनु, बैजापुरमा १५ शैय्याको राप्तीसोनारी अस्पताल सञ्चालन हुनु, नौं वटै वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीको निर्माण हुनु, गाउँमै बर्थिङ सेन्टरको सुविधा, टोलटोलमा सडक विस्तारसँगै पक्की पुल, कजवे र आवश्यक परेको ठाउँमा हिमपाइप राख्दै आजतजावतमा सहज बनाएसँगै स्थानीयवासी दङ्ग छन् ।
गाउँपालिकाले सडक निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएपछि राप्तीसोनारीका स्थानीय नागरिक पनि समृद्ध बन्न थालेका छन् । राप्तीसोनारीका सबै वडाका बस्तीबस्तीमा सडक पुगेका छन् । सडक पुगेपछि स्थानीय कृषक बढी लाभान्वित भएका छन् । कृषकहरू आफूले उत्पादन गरेका वस्तु बिक्री गर्न डोकोमा बोक्नु नपरेर घरघरबाटै बिक्री भएपछि हर्षित छन् । घरघरमा सडक बनेको छ । सडक बनेपछि स्थानीयहरू व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती, कुखुरापालन र पशुपालनमा लागेका छन् । रोजगारीको लागि विदेश गएका पनि फर्किएर व्यावसायिक कृषिमा लाग्न् थालेका छन् । मानौं अब राप्तीसोनारीमा कृषि क्रान्ति नै हुँदैछ । त्यसो त स्थानीयको माग कृषि र पशुपालनमा छ । गाउँपालिकाले पनि कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषकहरूले उत्पादन गरेका खसीबोका, तरकारी, दूध, अन्डा र कुखुरा लगायतका वस्तुहरू स्थानीय बजार र जिल्ला सदरमुकाम नेपालगन्ज मात्रै होइन काठमाडौं र पोखराजस्ता अन्य ठूला शहरहरुमा समेत निर्यात हुन थालेका छन् ।
प्राकृतिक स्रोत साधनले समृद्ध राप्तीसोनारी गाउँपालिका विकासमा फड्को मार्दै भन्ने जनप्रतिनिधिहरुको काम गर्ने शैलीले नै प्रष्ट हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियताले विकासको गति बढेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले अझ निर्वाचनका बेला गरेका बाचा अक्षरशः पालना गर्दै योजनाबद्ध विकासका काम भइरहेका छन् । निर्वाचन भएको चार बर्षमै यति ठूलो परिवर्तन आउनेमा नागरिकहरु नै विश्वस्त थिएनन् । कोरोना महामारीका कारण केही आयोजनाहरु प्रभावित भए पनि विकासको गति रोकिएको छैन । समयमै आयोजनाहरू सक्न नागरिकले निगरानीसमेत गरिरहन्छन् । नौं वटै वडाभित्रका सडकहरुको स्तरोन्नति र कालोपत्रेको काम, जीर्ण अवस्थामा पुगेका विद्यालयका भवनको पुनःनिर्माण, विद्यालयमा स्मार्ट कक्षा सञ्चालन, कृषकसँग अनुदानका कार्यक्रमहरु सञ्चालनले पनि गाउँहरु फेरिएका छन् । विकास निर्माणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, पर्यटनजस्ता क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यक्रम सञ्चालन गरेकै कारण राप्तीसोनारी गाउँपालिका समृद्ध बन्दै गएको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३, ४, ५, ६ र ७ मा पुग्न कुनै बेला निकै कठिन पनि थियो । राप्ती नदीका कारण दुर्गम थियो । मालसामान बोक्नेदेखि सरकारी अड्डाका काम गर्न पनि डुंगाको भर पर्दा सास्ती हुन्थ्यो । जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्दा कतिखेर प्राण जाने हो ठेगान हुन्थेन । तर अहिले ती दुखका दिन हराएका छन् ती वडाका नागरिकहरुलाई । अहिले जीवन शैली फेरिएको छ, सरर… बस चढेर सदरमुकाम आउजाउ गर्छन् । अड्डाका काम सकेर बेलैमा घर फर्किन्छन् । राप्ती नदीको कम्दीघाट र अगैयामा पक्की पुल र सडक निर्माण भएपछि सदरमुकाम नेपालगन्जसम्मको दूरी निकै घटेको छ । राप्ती नदीको अन्य स्थानमा पनि कतै पक्की पुल निर्माण भइरहेका छन् भने कतै निर्माणको सुरसारमा छन् । पुलसँगै हुलाकी सडक स्तरोन्नती भइरहेकाले पनि दुर्गम रहेका राप्तीसोनारीका ती वडाहरु सुगम बनेका छन् । पहिले राप्ती नदीमा पुल नहँदा मालपोत, नापी लगायत सरकारी कामका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्दा स्थानीय नागरिकहरु पीडित थिए । राज्यको उपस्थिति प्रायः शून्य भएको महशुस गर्थे । स्वास्थ्य उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनुपथ्र्यो । कैयौं पटक डुङ्गा पल्ँिटदा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपथ्र्यो । राप्ती नदीका विभिन्न स्थानमा पुल बनेपछि स्थानीयको दैनिकी फेरिएको छ । त्यी क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसाय बढेको छ ।
विकास र समृद्धिका कदमहरु यति तीव्र गतिमा बढेका छन् कि यी सबै कुरा देख्दा सर्वसाधारणहरु यतिधेरै दंग र गौरवान्वित छन् कि एउटा काम सकिएर त्यसलाई जनताले वाहवाह भनी सक्न नभ्याई अर्को त्योभन्दा पनि बढी गौरवान्वित कामको उद्घाटन भएको पाउँदा नागरिकलाई त्यसको प्रशंसा गर्ने शब्दकै अभाव भएको महशुस हुनेछ । गाउँपालिकाका जिल्लाका कुनाकुनालाई, बस्ती बस्तीलाई अनेकौं पुल, ढल, खानेपानी, विजुली र सडकहरुको सञ्जालले जोडिँदैछन् । अनेकौं नयाँनयाँ विकासका आधुनिक कार्यक्रमहरु बन्दैछन् । यो छोटो समयभित्रै कयौं योजनाहरु पूरा भए, धेरै पूरा हुने क्रममा छन् । जसले जताततैबाट उत्साह र उमङ्ग छाएको छ । जनता पूर्णआशावादी भएका छन् । पर्यटकीय स्थानहरुको विकास, प्रबद्र्धन र त्यससँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमले यस अभियानमा अर्काे कोसेढुङ्गा थपिरहेका छन् । सदीयौंकालदेखि उपेक्षित र ‘बत्तीमुनिको अँध्यारो’जस्तै रहेको राप्तीसोनारीले साँच्चिकै जुनी फेरेर नमूना गाउँपालिका बन्ने विश्वस्त आधारहरु बन्दै गएका छन् । –समृद्ध राप्तीसोनारी बुलेटिनबाट